लगानी सम्मेलनको कुम्भ मेलामा मुलुकः कस्ता छन् आजका कार्यक्रम ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । आज मुलुक लगनीको कुम्भ मेलामा जुटेको छ । ४० देशबाट ६ सय बढी लगानीकर्ताहरु जुटेको लागनी सम्मेलनमा चीन, भारतदेखि अमेरिका, युरोप र नेपाली मुलकका एनआरएनएसम्म सहभागी हुँदै छन् ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार यो लगानी सम्मेलन यस अघिको भन्दा फरक र मूर्त आकारको छ । यस अघिको भन्दा आजबाट सुरु भई दुई दिनसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा नेपालले खाका सहितका परियोजनाहरु पस्कने छ ।
संघीय संरचनामा गएपछि कानुनतः आवश्यक संरचना तथा लागनीको नीतिगत आधार तयार गरेर पहिलो पटक मुलुकले यस खालको लागनी सम्मेलन गर्न लागेको हो ।
आर्थिक वृद्धिः ‘उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा उद्घाटन हुने यस लागनी सम्मेलनले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेको सरकारको दाबी छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले दिएको लक्ष्य बमोजिम सन् २०२२ भित्र मुलुकलाई दुई अंकको आर्थिक वृद्धि र सन् ०३० भित्र राष्ट्र संघले तय गरेको दीगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यमा पुग्न नेपालले आजैदेखि जग हाल्नु पर्ने अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ ।
उक्त लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रक्षेपण गरे अनुसार करिब १७ खर्ब बराबरको लागनी मुलुकमा आवश्यक छ ।
यस सम्मेलनमा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेका ठूला आयोजनाहरु बास्केटकै रुपमा प्रस्तुत हुने छन् ।
आजदेखि हुने यस सम्मेलनमा सरकारले ५० वटा र निजी क्षेत्रबाट २७ वटा गरी ७७ वटा आयोजनाहरुको ‘शो केस’ तयार नै छन् ।
राजधानी काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्था समेत चुस्तदुरुस्त बनाइएको यो सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी लागनीकर्ता चीनबाट आएका छन् ।
दर्जन बढी परियोजनामा हस्ताक्षर हुने
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा अनुसार यो सम्मेलन विगतको भन्दा फरक यस अर्थमा हुँदैछ, विगतमा कुरामा मात्र सीमित भएका आयोजनाहरुमाथि यस पटक भने सहमतिमा हस्ताक्षर नै गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले दिएको लक्ष्य बमोजिम सन् २०२२ भित्र मुलुकलाई दुई अंकको आर्थिक वृद्धि र सन् ०३० भित्र राष्ट्र संघले तय गरेको दीगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यमा पुग्न नेपालले आजैदेखि जग हाल्नु पर्ने अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाइ
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रक्षेपण गरे अनुसार करिब १७ खर्ब बराबरको लागनी मुलुकमा आवश्यक छ
नेपाली गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र स्वदेशी लगानीकर्ता निजी क्षेत्र पनि उत्साहजनक रुपमा थप ६ सय प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी हुने छन् ।
सात प्रदेशबाट पनि योजना सामेल हुने
आयोजक नेपाल सरकारले यो सम्मेलनमा सातै प्रदेशका तर्फबाट थप केही योजनाहरु प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ ।
को को छन् वक्ता ?
स्वदेशी तथा विदेशी सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरु सहभागी यस सम्मेलनमा प्रतिनिधि मूलक वक्ताहरु रहेका छन् । जहाँ प्रम ओलीको विशेष सम्बोधन रहने छ । सम्मेलनकै लागि यतिबेला सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु राजधानीमा जम्मा भइसकेका छन् ।
कार्यक्रम दुई दिनसम्म नै होटल सोल्टीमा चल्ने छ । बिहान ९ बजे सम्मेलनको उद्घाटन हुने छ ।
उद्घाटन पछि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, सम्मेलनमा म्यान्माका लगानी तथा विदेश आर्थिकसम्बन्धी मन्त्री यू थाउङ टुन, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टवीग स्याफर, एशियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष सिजिन चेन र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी आदिले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सम्मेलनमा एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका लगानी तथा कार्यसञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष होङ ली तथा माइक्रोसफ्ट, अमेजन, पावर चाइना, चाइना रेल्वे, डाबर, युनिलिभरलगायतका विश्व प्रसिद्ध कम्पनीका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु सहभागी हुने छन् ।
३४ खर्ब ६८ अर्बका ७७ आयोजना सम्मेलनको प्रदर्शनीमा, ४० देशका ६ सय बढी उच्च पदस्थ सहभागी
अवसरका क्षेत्रमा खुलेर बहस
सम्मेलनको पहिलो दिन नेपालमा लगानीको अवसर माथि खुला छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ । लागनी बोर्डले तयार पारेको कार्यतालिका अनुसार ‘ऊर्जा, सूचना तथा प्रविधि’ विषयक छलफल र व्यवसायमा महिला र युवा उद्यमशीलताको विकास छलफल हुनेछ ।
विदेशी लगानीमैत्री बनेको छ ऐन
दोस्रो दिन शानिबार कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात शहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी परियोजना प्रस्तुत हुने छन् ।
विदेशी लागनीलाई नै लक्षित गरी सरकारले हालै सङ्घीय संसद्बाट पारित गरेका ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन’, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’, पारित गरिसकेको अवस्था छ भने ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन’ पनि संशोधन गरिसकेको छ ।
यी ऐनहरु स्वदेशी निजी क्षेत्र भन्दा पनि बढी विदेशी ठूल्ठुला लागनी भित्राउने उद्देश्य राखेर गृहकार्य गरिएको देखिन्छ ।
स्वदेशी उद्यमीहरुको पनि अनिवार्य संलग्नताबारे भने सरकारले सोचेको देखिदैन । जसको निजी क्षेत्रले आलोचना गरेको छ ।
लागनीको आकारः ऊर्जा क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा
सरकारले तयारी गरे अनुसार ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा छ । त्यसपछि सेवा क्षेत्र जस्तै पर्यटन व्यवसाय र अन्य क्षेत्रहरु रहेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा १२ खर्ब रुपियाँ लगानी जुटाउने तयारी सरकारको रहेको छ ।
परियोजनाहरु हेर्दा यस सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट तयार पारिएका ६४ करोडदेखि ३ खर्ब ५० अर्बसम्मका परियोजना प्रस्तुत हुनेछन् ।
ऊर्जा क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता पाएको यस सम्मेलनमा ८ ठूला परियोजना छनोट गरिएका छन् ।
जसमा नलगाड जलविद्युत् आयोजना, एआर–६, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, तमोर जलाशयुक्त आयोजना, पश्चिम सेती, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्त प्रमुख आयोजनाका रुपमा रहेका छन् ।
लागनी बोर्ड अनुसार ३१ खर्ब बराबरका परियोजनाहरुक सूची तयार छ ।
सम्मेलनको पहिलो दिन ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उद्योग र पर्यटनका विषयमा आयोजनहरूको जानकारी दिइने छ ।
त्यस्तै, दोस्रो दिन भने पूर्वाधार, कृषि, नेपालमा लगानीको अनुभव सेयर, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदान प्रदानको कार्यक्रम रहेको छ । सम्मेलनको अन्त्य, शनिबार साँझ ६ बजे सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित हुने छ ।